ဘဏ်များနိုင်ငံရပ်ခြားရှည်လျားမဟုတ်ဘဲသံသယရှိဂုဏ်သတင်းကနေခံစားခဲ့ကြရသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏအခွန်ဆိပ်နိုင်ငံများတွင်တည်ရှိသောခံအဖြစ်ယူဆနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, မပြည့်မသူတို့မရိုးသားတဲ့လူတွေဝင်ငွေဆိနှင့်အခွန်ရှောင်မှုကိုမှတဆင့်၎င်းတို့၏အစိုးရများလိမ်လည်ကူညီထင်ပါတယ်။ ပို. ပို. သို့သော်ဒီအနုတ်လက္ခဏာပုံရိပ်ကွာမှုန်ဝါးစေရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ပြည်ပဘဏ်များကိုယခုအများအားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာ, တရားဝင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။
ရေခြားမြေခြားဘဏ်များရှိလူများဖွင့်လှစ်အကောင့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်။ ရေတွင်းတစ်တွင်း-သဘောပေါက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်၏တဲ့အခါမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်ထဲမှာအကောင့်တစ်ခုကိုသင်၏ပိုက်ဆံကာကှယျစောငျ့ရှောကျကူညီနိုင်သည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန် LLC နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအတွက်နိုင်ငံခြားအကောင့်ကိုင်ပြီးသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကသင့်ဒေသခံတရားရုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကနိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာလွယ်ကူချောမွေ့ကူညီဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ပညာသတိရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသူတို့အိမ်ပြန်နိုင်ငံများရှိရရှိနိုင်မကျမည်အကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူမှသူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ အတော်များများကအမေရိကန်များနှင့်အီးယူဒေသခံများက၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာဘဏ်များအတွက်မြဲဖှယျအတိုးနှုန်းငြီးငွေ့အပေါ်အားကိုး ကမ်းလွန်ဘဏ် ပိုမိုမြင့်မားသောအကျိုးစီးပွားပြန်ခံစားဖို့။
အမေရိကန် Clients တွေအနေနဲ့ Accept ကြောင်းကမ်းလွန်ဘဏ်များ
ဒီနယ်ပယ်များတွင်လိုအပ်သော legwork လုပ်နေတာအဆုံး၌ပယ်ချေ။ အားစိုက်ရသောနှင့်တင်းကျပ်အစီရင်ခံစည်းမျဉ်းများရှိနေသော်လည်းအများအပြားရှိနေဆဲရှိပါတယ် အမေရိကန် clients များလက်ခံသောနိုင်ငံခြားဘဏ်များ။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုတန်းတူဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမတိုင်မီ option တခုစီ၏အကောင်းအဆိုး cons ချိန်ဖို့အချိန်ကိုယူပါ။ သင်သို့သော်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ပါစေပြီးတာနဲ့ရှေ့ထိုးနဲ့စောင့်ဆိုင်းကြဘူး။ သည်သင့်အမည်နှင့်အတူတစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုအန္တရာယ်မှာသင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအားမရအမေရိကန်တရားသူကြီးများ၏စားပွဲခုံပေါ်ဆင်းသက်မည်သည့်အခါသင်သိဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ဘဏ်များရေခြားမြေခြားလည်းကမ်းလွန်ဘဏ်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဘဏ်များအဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ငွေထုတ်ရဲ့အိမျတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာတည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းရိုးရှင်းစွာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီဘဏ်တွေအဓိကအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာခဏသူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်လျှို့ဝှက်၏ shroud တစ်ရိပ်ရတဲ့ဂုဏ်သတင်း၏တစ်ခုခုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စည်းမျဉ်းတိုးမြှင့်မှုများတဖြည်းဖြည်းရေခြားမြေခြားဘဏ်များ၏ဤလျှို့ဝှက်ပုံရိပ်မှာကွာပဲ့ပါပြီ။ ယနေ့တွင်သူတို့ပိုကောင်းတဲ့တရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နားလည်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
လက်တွေ့ကျကျအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံယခုမှန်မှန်ဿုံဥပဒေရေးရာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပြီးစီးရန်ရေခြားမြေခြားဘဏ်များကိုအသုံးပြုဖို့အနေဖြင့်ပြည်သူ့။ သွားကြောင်းလျှို့ဝှက်၏ရက်ပေါင်းများမှာ ဆွစ်ဘဏ်အကောင့် မီးခိုးနှင့်ကြေးမုံနောက်ကွယ်မှဖုံးကွယ်။ သငျသညျကိုအောက်တွင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်အတိုင်းဘဏ်များရေခြားမြေခြားကသင့်ပိုက်ဆံသင်တို့အဘို့ခက်ခဲအလုပ်လုပ်စေရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်။
အတိတ်ကာလများတွင်အများအားပင်လယ်ရပ်ခြားဘဏ်လုပ်ငန်းအကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သည်တွေနဲ့အခွန် cheat ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်သင်တန်း၏, 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်မှန်တဲ့ဖူးပါ။ သို့သော်အမြင်ကျယ်ပြန့်ကျင်းပနှင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအမြစ်တွယ်နေပြီးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ဝါဒအဖြစ်မကြာသေးမီကကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်များ, သိသိသာသာဘဏ်လုပ်ငန်းရှုခင်းပြောင်းလဲပါပြီ။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အများစု သာ. ကြီးမြတ်င့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီခဲ့ပါပြီ။ ဤသည်တစ်ချိန်ကရေခြားမြေခြားအများအပြားဘဏ်များအတွက်ခရီးသွားရာတွင်-on ကိုယုတ်လျော့စေသည်ဆိ၏ကုလားကာများရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း + ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ
တိုးမြှင့်လင်းမြင်သာမှု, သို့သော်, လုံးဝအနေနဲ့နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်အကောင့်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြိုးခံစားခှငျ့လျော့မထားပါဘူး။ အသစ်ထူထောင်ပြီးအများကြီး-တိုးတက်လာသော ကမ်းလွန်ဘဏ်သတင်းအချက်အလက် ခွဲဝေမှုကခက်ခဲနိုင်ငံခြားဘဏ်ထဲမှာကျင်းပပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ရန်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာဘယ်မှာသင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာ nemesis သိတယ်ရုံရှိသောကြောင့်သူသို့မဟုတ်သူမသူတို့ကိုရနိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ ရေခြားမြေခြားကသင့်ပိုက်ဆံ Parking အလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဏ်တည်ရှိရာနိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်မဟုတ်။ ဒီတော့အဖြေကဘာလဲ? တစ်ဦး၏အတွင်းပိုင်းကမ်းလွန်သင်တို့ငွေကိုချပြီး ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ ထိုသို့သောကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ LLC အဖြစ် ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု ယုံကြည်မှု။ သင့်ရဲ့ဖော်ရွေရပ်ကွက်အတွင်းတရားသူကြီးကိုသင်ပြန်ပိုက်ဆံဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းတောင်းဆိုနေပြီသောအခါဤလမ်း, သင်သည်သင်၏အခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးထားတဲ့မဟာမိတ်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဂေါပကသင်သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်ထဲမှာပိုက်ဆံနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာ tools များနှင့်အတူ, အခွင့်အရေးယူအကြွေးနိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေများအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်။ သူတို့သည်သင်၏ပိုက်ဆံထဲကနေသင်ကခွဲခြားရန်လိုလျှင်သူတို့ကိုတက်မယ့်နီးပါးကျြောလှားနိုငျသောတောင်ပေါ်ရှိသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့နောင်တရန် (နှင့်သင့်အားသာချက်မှ) အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကရှုပ်ထွေး, ရေးဆွဲထွက်နှင့်စျေးကြီးဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညွှန်ပြအဖြစ်သင်သည်သင်၏နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအတွက်နေရာလျှင်, နှစ်ထပ်ကွမ်းခက်ခဲသည်။ ကိုသတိရပါ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ပိုပြီးအလွှာတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှတရားစွဲဆိုမှုနှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအကြားရှိပါတယ်, ပိုလုံခြုံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရှိနေခြင်းရှိပါတယ်လျှင်သင်ပြီးသားနိုင်ငံခြားဘဏ်များအတွက်အကောင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏အားသာချက်များကိုငါသိ၏။ ပြည်ပဘဏ်များကိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိန်ထမ်းများနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ခလစာန်ဆောင်မှုကိုပေး။ ထို့အပြင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကုမ္ပဏီများသည်အကြားအကောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ငွေပေးချေမှုသေချာစေရန်အကြွေးမှအက္ခရာများသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့အကုန်အကျရှိနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပဘဏ်များပုံမှန်ဒီစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုန်ဆောင်မှုကိုပေး။
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေးနိုင်ငံတကာလက်လှမ်းမမီပျော်မွေ့မထားဘူးဆိုရင်တောင်ရေခြားမြေခြားအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နေဆဲသဘာဝကျပါတယ်။ သငျသညျလျင်မြန်စွာရုတ်တရက်နိုင်ငံတကာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာစေခြင်းငှါအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ယူကောင်းမွန်စွာနေရာချထားဖြစ်လိမ့်မယ်။ မည်သည့်လာဘ်စီးပွားရေးသမားသိတယ်အဖြစ်, ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းပြည်တွင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအမျိုးအစားမှအကျိုးရှိပါတယ်။
သင်သည်သင်၏နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်လြှငျ, ခွဲခြားသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒီနည်းလမ်းဟာကြွေးရှင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု၏လုံခြုံရေးစိမ့်ဝင်သွားတယ်လျှင်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည် - သို့မဟုတ်ဒုနျအလှနျ။ သူသို့မဟုတ်သူမသင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုလားပါလျှင်သင့်ရဲ့ကြွေးရှင်သည်သင်တို့တဘက်၌အခြားအမှု mount မှရပါလိမ့်မယ်။ အခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှတစ် settlor-ဖော်ရွေတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ LLC ကိုတည်ထောင်စဉ်းစားပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အရေခြားမြေခြားဘဏ်ထဲမှာ '' အိမ်သူအိမ်သား '' မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုကြောင်း entity ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပြည့်စုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏နောက်ထပ် layer ကို။
အောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်ဦးပိုမိုစုံလင်လာအစုစုကိုကန့်သတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်တသားတထက်ပိုကောင်းတဲ့ဈေးကွက်နှင့်စီးပွားရေးအတက်အကျခံနိုင်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဘဏ်များနိုင်ငံရပ်ခြားကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများရယူငွေထုတ်ပေးပါ။ ဤသည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်စင်္ကာပူနဲ့တူလူကြိုက်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစင်တာများအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ သူတို့ပြန်လာအတွက် generate သာ. ဝင်ငွေ - တစ်နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်အသုံးပြုခြင်းထူးခြားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးတံခါးပေါက်ပေးပါသည်။
အတော်များများကနိုင်ငံခြားဘဏ်များနေဆဲအမေရိကန်များနှင့်အီးယူဒေသခံများက၎င်းတို့၏ငွေပိုကောင်းတဲ့အတိုးနှုန်းပေးပါ။ ဤသည်ကတခြား client များအနေဖြင့်ဒေါ်လာစျေးချေးငွေအဘို့ကြီးစွာသောဝယ်လိုအားရင်ဆိုင်နေရသူနိမ့်ဒေါ်လာစျေးသိုက်နှင့်အတူနိုင်ငံများရှိဘဏ်များများအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ သူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေသွင်းရန်သင့်ကိုသွေးဆောင်ခြင်းငှါ, သူတို့မက်လုံးပေးကမ်းလှမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အတွက်စိတ်ပျက်စရာအတိုးနှုန်းနှင့်အတူမြင့်မားအတိုးနှုန်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တခုဆွဲဆောင်မှုသွေးဆောင်သည်။ သငျသညျသိုက်အတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာပြောနေတာဖွင့်မဟုတ်လျှင် - ဒေါ်လာနှင့်ဆင့်အတွက်အမှန်တကယ်ကွာခြားချက်ဘယ်လောက်မှစောဒနာမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာင် သဘောပေါက်ခြင်း ကိုယ်ငွေဟာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုပိုပြီးဝင်ငွေ။ ဒါကသူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများတွင်အတိုးနှုန်း disappointing ငြီးငွေ့နေသောငွေထုတ်ဘို့အထူးသဖြင့်မှန်သည်။
လူတိုင်းအတွက်စံပြကြောင်းတစ်ခုကမ်းလွန်အကောင့်အတွက်အဘယ်သူမျှမစုံလင်သောရေခြားမြေခြားတည်နေရာသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ မဟုတ်ရင်တောင်းဆိုသူကိုဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးသတိထားရှိစေသတည်း။ ဒါဟာကမ္ဘာ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုအခြားသူများထက်ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်း, သင်တန်းစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ သငျသညျရှေးခယျြခဲ့, သင်ပြုလျှင်အဘယ်ကြောင့်သင်ကနိုင်ငံရေးအရမတည်မငြိမ်တိုင်းပြည်အတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားဘဏ်ကိုရွေးချယ်မလဲ?
သငျသညျအဆင်ပြေနေရာနှင့်အတူအန္တရာယ်အဆင့်နှင့်အတူစတင်။ သငျသညျအလွန်သေးငယ်သောကျွန်းလူအမျိုးမျိုးပေါ်ဘဏ်များတည်ငြိမ်များမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တစ်ခုအာရှသို့မဟုတ်ဥရောပနိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်အဘို့အရွေးချယ်။ တန်ခိုးကြီးသောနှင့်ပြင်းထန်စွာ-ကြားနေဆွစ်ဇာလန်သင်တို့အဘို့တစ်ခု option ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပေမယ့်, တကရှည်လျားပြီးတည်ငြိမ်ဘဏ်လုပ်ငန်းသမိုင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ်ဖွင့်အတိတ်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည်က၎င်း၏အမှန်တကယ်တည်နေရာထက်သင်ပိုအရေးကြီးတယ်လိုလျှင်, ဟောင်ကောင်နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပါလိမ့်မယ်။
Next ကို, သင်နိုင်ငံရပ်ခြားသင်၏ဘဏ်အစေခံမည်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်တွင်ကိုသုညသငျ့သညျ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင့်ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်လျှင်, အရှိဆုံးငွေထုတ်-ဖော်ရွေဥပဒေပြဌာန်းနှင့်အတူတစ်ဦး၏တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤသင်တို့သည်လည်းမျက်နှာသာနှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ယုံကြည်မှု settlors နှင့် LLC တည်ထောင်သူကာကွယ်ပေးကြောင်းတရားစီရင်မှုစဉ်းစားရန်လိုပေမည်။ သင်တစ်ဦးယုံကြည်မှုသို့မဟုတ် LLC အောက်မှာသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုနေရာချပါလျှင်ဤနည်း, သင်တို့ကိုအလိုအလျှောက်ကိုယ်ငွေအားလက်ခံတွေ့ဆုံအကာအကွယ်နှစ်ဆ။ တစ်နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအားမရအဘို့သင့်မူလတန်းရည်မှန်းချက်သင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူလျှင်ဘဏ်သင်၏ရွေးချယ်မှုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်, သင့်ရွေးချယ်မှုကိုသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအဘို့အသငျသညျရှိသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးကူညီသင့်တယ်နေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ရှေးရိုးစွဲဘဏ်လုပ်ငန်းမူဝါဒများအဘို့အစိုင်အခဲဂုဏ်သတင်းကိုမှခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူဘဏ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်သိရ FDIC သာဒေသခံအမေရိကန်ဘဏ်များအတွက်သိုက် insures ။ သို့သျောလညျးသငျသညျကမ္ဘာ့ရှာဖွေလျှင် အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များသငျသညျကိုအမေရိကန်, ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်ထိပ်3စာရင်းတွင်သာ 50 ရှိကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။ တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဒေသခံဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကမ်းလွန်ဘဏ်တစ်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။ ရှေးရိုးစွဲဘဏ္ဍာရေးနှစ်မူဝါဒများအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းဘဏ်များရိုးရှင်းစွာသူတို့ client ကိုရဲ့ငွေနှင့်သတိထားနေဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစသူတို့ဖွယ်ရှိရန်ပုံငွေခိုးမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမှကာကွယ်ရန်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ချိန်ခွင်တစ်ခုတင်းကျပ်သော protocol ကိုတိုကိုဆိုလိုသည်။
ပြည်ပဘဏ်များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်သူတို့ရဲ့အကြီးအကျယ်လွဲမှားစေသောသံသယရှိဂုဏ်သတင်းကိုချွတ်လှုပ်နေကြသည်။ သူတို့ဟာနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ဘဏ်များရေခြားမြေခြား, သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းအလွယ်ကူချောမွေ့, သူတို့၏ငွေထုတ်ဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ဝင်ငွေသည်။ လူတိုင်းအတွက်စံပြရဲ့အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းကမ်းလွန်တည်နေရာရှိပါသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအချက်များ၏နံပါတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤအအကြောင်းရင်းများအနက်ဖြစ်သင့်: သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေနေစွန့်စားမှုများ၏အဆင့်ကို, သင်ထားတဲ့နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ဘဏ်၏ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများနှင့်သူတို့တည်ရှိသည်ရှိရာရပ်ရွာထဲတွင်အခန်းကဏ္ဍကနေအဓိကအကြောင်းရင်း။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်အသုံးပြုဆုံးဖြတ်ရေခြားမြေခြားအဘယ်အရာကိုဘဏ်, သင့်ငွေကိုတပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုအဘို့သင့်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံသေချာပါစေ။